Archive du 19/03/2012
Tontosa ny sabotsy 17 sy alahady 18 martsa, faran�ny herinandro teo, ny fanazavan-kevitra sy fanomezana toromarika nataon'ny mpikatroka kung-fu sy ny fikambanana ANAWI, miara-dia amin'ny Maitre Avoko Rakotoarijaoana ary manatanteraka ilay hetsika Masoandro Maraina.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Ankolafy Ravalomanana Mitohy ny hetsika ao Toamasina
Nanao hetsika teo an-tokotaniben�ny Magro Tanambao V ny ankolafy Ravalomanana ny sabotsy 17 martsa teo.
CT Rakotomandimby D�sir� Miantso ny hisian�ny fiaraha-mitantana
Azo alain-tahaka ny firaisankina nananan�ireo hery politika maro misy ao amin�ny Faritra Amoron�i Mania nahitana olona atolotry ny marimaritra iraisana hitantana ny Faritra ka nametraka avo ny tombontsoam-bahoaka fa nampandefitra ny hambom-po politika, hoy ny mpikambana ao amin�ny kongresin�ny tetezamita, Rakotomandimby D�sir� ny sabotsy 17 Martsa lasa teo.
Nanao tsindrom-paingotra ireo mpitondra ao Mahajanga
Taorian�ny angaredona nanala fako ny herinandro lasa iny dia nifamotoana tao Amborovy ireo mpikambana Arema ao Mahajanga ny sabotsy 18 martsa teo nanamarika ny faha-36 taonan�ity antoko naorin�ny amiraly Ratsiraka ity.
Tondrozotra dia fifidianana ihany no izy
Atahorana ny fifandonana !
Efa tonga tamin�ny fanakanan-dalana miditra ny ozinina ao Tanandava ny hetsik�ireo mpiasa taloha tao Ambatovy, ny zoma teo, fotoana indrindra nahatongavan�ny minisitry ny harena ankibon�ny tany, Randriafeno Danielle sy ny minisitry ny fahasalamana, Ndaimanjara Johanita.
Nilavo lefona Rasamoely Fr�d�ric
Tontosa ny alin�ny zoma 16 martsa teo ny famindram-pahefana teo amin�ny Governoran�ny Banky foiben�i Madagasikara, Rasamoely Fr�d�ric, sy ny mpisolo toerana azy vonjimaika sady Tale jeneraly rahateo, Ratovondrahona Guy.
Sarety, posy, fiarabe Miady arabe eto an-drenivohitra
Asa noho ilay hoe tetezamita na ahoana, fa dia goragora tanteraka ny fandaminana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra eto.
Tsimialonjafy ny Zanak�i Dada
Matoam-baovao amin'ity alatsinainy ity ny raharaham-pitsarana mahakasika ny raharaha BANI 2010, ka mahakasika manamboninahitra maromaro sy ny Pr Raymond Ranjeva sy ny zanany vavy.